Ny toeram-pambolena rivotra lehibe indrindra manerantany (an-dranomasina sy an-dranomasina) | Fanavaozana maintso
Ny toeram-piompiana rivotra dia vondrona turbine rivotra izay ovay ho angovo elektrika ny angovo avy amin'ny rivotraIzy ireo dia mety ho terestrialy na an-dranomasina.
Ny 8 amin'ireo toeram-piompiana rivotra lehibe indrindra eto an-tany dia any Etazonia, ary ny dimy amin'izany dia any Texas. Ary koa, eo anelanelan'ny ao amin'ny TOP 10 dia iray ihany ny fiompiana rivotra any ivelany, izay terestrialy hafa rehetra. Hanasokajintsika azy ireo araka ny fahaizany napetraka izy ireo:
2 2. Mpiompy Wind Wind Flat:
4 4. Ivotoeran-jiro mahery vaika:
6 6. Farm Farm Wind Andranomasina London:
9 9. Fambolena Rivotra:
10 10. Fambolena Rivotra Buffalo Gap:
El Ivotoerana angovo Alta Wind (AWEC, Alta Wind Energy Center) any Tehachapi, any California, Etazonia, dia amin'izao fotoana izao ny toeram-piompiana rivotra lehibe indrindra eto an-tany, izay manana fahaiza-miasa 1.020 MW. Ny toeram-pambolena an-dranomasina dia iasan'ny injeniera Terra-Gen Power, izay tafiditra ao anaty fanitarana vaovao hampitomboana ny fahafahan'ny fiompiana rivotra ho 1.550 MW.
2. Mpiompy Wind Wind Flat:
Any akaikin'i Arlington, any atsinanan'ny Oregon, any Etazonia no misy azy, io no toeram-piompiana rivotra faharoa lehibe indrindra eto an-tany izay manana 845 MW.
Novolavolain'ny injenieran'ny Caithness Energy, manakaiky ny 77 km² eo anelanelan'ny distrikan'i Gilliam sy Morrow ny fotodrafitrasa Ny tetikasa, novolavolain'ny injenieran'i Caithness Energy any amin'ny faritra iray mihoatra ny 77 km² teo anelanelan'ny distrikan'i Gilliam sy Morrow, nanomboka ny fananganana tamin'ny taona 2009 tamin'ny vidiny $ 2000 miliara.
Ny valan-javaboary dia misy turbine 338 GE2.5XL, izay samy manana ny habeny 2,5 MW.
El Fambolena Rivotra Roscoe dia eo akaikin'i Abilene any Texas, Etazonia, no toeram-piompiana rivotra lehibe fahatelo eto an-tany amin'izao fotoana izao izay manana kapila voafetra 781,5 MW, novolavolain'ireo injenieran'ny E.ON Climate & Renewables (EC&R). Ny fananganana azy dia natao tamin'ny dingana efatra teo anelanelan'ny 2007 sy 2009, izay misy velaran-tany 400 km² amin'ny tanimboly.
Manokana, ny dingana voalohany dia nahitana ny fananganana turbine 209 Mitsubishi an'ny 1 MW, tamin'ny dingana faharoa dia nisy turbine Siemens miisa 55 MW napetraka, ary ny dingana fahatelo sy fahefatra dia nampidirina turbine 2,3 GE an'ny 166 MW ary 1,5 turbins Mitsubishi an'ny 197 MW tsirairay avy. Total, Turbine rivotra miisa 627 no napetraka tamin'ny halavirana 274 metatra, izay nanomboka niara-niasa tamin'ny fahafaha-miasa tanteraka hatramin'ny Oktobra 2009.
4. Ivotoeran-jiro mahery vaika:
Ity valan-javaboary ity dia eo anelanelan'ny Taylor sy ny Nolan County any Texas, Etazonia, izy io no toeram-piompiana rivotra fahaefatra lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny fahafaha-manana 735,5 MW.
Niorina tamin'ny dingana efatra ireo fotodrafitrasa ireo nandritra ny taona 2005 sy 2006, miaraka amin'ireo injenieran'ny Blattner Energy tompon'andraikitra amin'ny injeniera, ny fividianana ary ny fananganana (EPC) ho an'ilay tetikasa. Manokana amin'ny dingana telo voalohany amin'ny tetikasa Turbine 142 no napetraka 1,5 MW avy amin'ny GE, 130 2,3 MW avy amin'ny Siemens ary 149 avy amin'ny 1,5 MW avy GE avy.
Izy io dia eo anelanelan'ny kaontinanta Sterling sy Coke any Texas, Etazonia, izy io no toeram-piompiana rivotra fahadimy lehibe indrindra eran'izao tontolo izao manana 662,5 MW, tantanan'ny injeniera NextEra Energy Resources. Ny fananganana azy dia natao tamin'ny dingana roa, ny voalohany dia vita tamin'ny 2007 ary ny faharoa tamin'ny 2008.
Ny toeram-piompiana rivotra dia misy turbinina 342 GE 1,5 MW ary turbine rivotra 65 Siemens 2,3 MW, mirefy 79 metatra miala ny tany. Vokatr'izany, ny fiompiana rivotra dia afaka manome ny filan'ny herinaratra trano maherin'ny 220.000.
6. Farm Farm Wind Andranomasina London:
London Array, zaridaina an-dranomasina lehibe indrindra eto an-tany miaraka amina 630 MW, mitana ny laharana fahenina lehibe indrindra eto an-tany. Namboarin'ny injeniera ao amin'ny Dong Energy, E.ON ary Masdar, ny toerana misy azy dia miorina ivelan'ny vavahady Thames mihoatra ny 20 km miala ny morontsirak'i Kent sy Essex.
Na eo aza ny valan-javaboary lehibe indrindra eto an-tany, dia mikasa ny hampitombo ny heriny ireo mpanentana azy hatramin'ny 870 MW amin'ny dingana faharoa miandry ny fankatoavana.
El Fiompiana Rivotra Fantanele-Cogealac miorina ao amin'ny faritanin'i Dobruja any Romania, izy no toeram-piompiana rivotra fahafito lehibe indrindra eto an-tany izay manana kapila voafetra 600 MW. Ilay tetik'asa novokarin'ny injenieran'ny CEZ Group dia mahatratra 1.092 hektara amin'ny firenena malalaka 17 kilometatra andrefan'ny morontsiraka Black Sea.
Ny turbine voalohany amin'ny fiompiana rivotra dia napetraka tamin'ny volana jona 2010, izay mampifandray amin'ny tambajotra turbine farany tamin'ny novambra 2012, nanomboka tamin'izay ny toeram-piompiana rivotra an-dranomasina lehibe indrindra any Eropa. Ny ivotoerana dia misy turbines-drivotra 240 GE 2.5 XL miaraka amina savaivon'ny rotor 99 metatra ary manana fahaiza-manao 2,5 MW isan-karazany, izay maneho ny ampahafolon'ny famokarana angovo maitso any Romania.
Any amin'ny Benton County any Indiana, Etazonia no misy azy ny fiompiana rivotra fahavalo lehibe indrindra manerantany. Ny tetik'asa, novolavolain'ny injeniera avy amin'ny BP Alternative Energy Amerika Avaratra sy Dominion Resources, dia notanterahina tamin'ny dingana roa, nahafahana nametraka ny fahafahan'ny 599,8 MW.
Ny fananganana ny toeram-piompiana rivotra, misy velaran-tany 20.000 2008 hektara mahery kokoa dia natomboka tamin'ny taona 2010, ary nanomboka niasa tamin'ny taona 182. Ireto avy no fotodrafitrasa misy turbine 82 Vestas V1.65-40MW, turbine 96 Clipper C-2,5 turbinina 133 MW sy 1,5 GE XNUMX MW. Miaraka, ny fiompiana rivotra dia afaka mamaly ny filan'ny fahefana ho an'ny trano maherin'ny 200.000.
9. Fambolena Rivotra:
El Zaridaina mamy, miorina ao amin'ny County Nolan, Texas, Etazonia, no toeram-piompiana rivotra fahasivy lehibe indrindra eto an-tany amin'izao fotoana izao izay manana kapila 585,3 MW, izay novokarin'ny injeniera Duke Energy sy Infigen Energy.
Natsangana tamin'ny dingana dimy izy io. Ny voalohany tamin'ireo dia nanomboka ny asa aman-draharaha ara-barotra tamin'ny taona 2003, raha ny dingana efatra ambiny kosa dia nanomboka nanompo tamin'ny 2007. Ireo fotodrafitrasa dia misy a turbine miisa 392, ao anatin'izany ny turbine 25 GE 1,5 MW, turbine rivotra 151 GE SLE 1,5 MW, 135 turbine rivotra Mitsubishi 1.000A 1 MW 81 ary turbine rivotra 2,3 Siemens XNUMX MW.
10. Fambolena Rivotra Buffalo Gap:
Any amin'ny 30 kilometatra atsimo andrefan'ny Abilene any Texas, Etazonia no misy azy, izy io izao no Fambolena rivotra faha-XNUMX lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao miaraka amina kapila napetraka 523,3 MW, fananan'ny orinasa AES Wind Generation. Tao anatin'ny dingana telo no nanatanterahana ny tetikasa, ny voalohany vita tamin'ny 2006 ary ny roa farany tamin'ny 2007 sy 2008.
Ny dingana voalohany amin'ny fiompiana rivotra dia nametraka turbine 67 Vestas V-80 1,8 MW, raha mitambatra kosa ireo dingana manaraka Turbine 155 GE 1,5 MW ary turbine rivotra 74 Siemens 2,3 MW tsirairay avy, ka 296 ny turbine misy rivotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny fiompiana rivotra lehibe indrindra eto an-tany
Ny fihenan'ny solika voajanahary dia nitombo raha oharina tamin'ny 2016